လီဗြောင်ဟွန်းပါဝင်တဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ပြမည်
“အရိပ်ဇာတ်ကားမှာ ပေါက်ကျိုင်းကို အားပေးလို့ ဝမ်းသာတယ်”ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်
ဒေါ်လာဘီလျံ ၇၀ တန်ဖိုးရှိ အမေရိကန်ကုန်စည်များ ဝယ်ယူရန် တရုတ်ကမ်းလှမ်း
GPU Turbo နည်းပညာပါဝင်တဲ့ "Huawei Honor Play” Gaming စမတ်ဖုန်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် နောက်ဆုံးပေါ် Ford ကား ၆ စီး
ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြုခံ မြဂနိုင်နှင့် စတန့်မင်းသား ချစ်ရွှေ
အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမလား ဆိုးမလား
မူဆယ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများကို KIO/KIA ငွေကြေး တောင်းခံစာပို့
ဗဟိုဘဏ်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စောင့်ဆိုင်းနေရသည်
တောင်ကြီးတွင် မိုးကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ကလေးတဦး သေဆုံး
ဩစတြေးလျသား ရော့စ်ဒန်ကလေ မူးယစ်ဆေးဖြင့် အဖမ်းခံရ
“ငွေစိုးက ဆုရသင့် ရထိုက်ပါတယ်” လို့ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ရန်ရန်ချန်း
“အချစ် ရှိပေမယ့် ချပြဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး”လို့ ပြောတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
“အနုပညာသက်တမ်း ၁၈ နှစ်မှာ လုပ်သလောက် ပြန်မရခဲ့ဘူး” ဆိုတဲ့ သူထူးစံ
၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသည့် ရမ်းဗြဲအမတ် အဖမ်းခံမည်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပဒေ မချိုးဖောက်ရန် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ပြော
ထရမ့်-ကင်မ် ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် စင်ကာပူ ထုတ်ဝေ
အအေးမိ ဖျားနာခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်လို အချိန်ဖြုန်းကြမလဲ
တိုက်ခန်း ၄ ထောင်ကျော် AYA Bank ချေးငွေဖြင့် ရောင်းမည်
Touchpad အစား Touchscreen ပြောင်းသုံးထားတဲ့ Asus ZenBook Pro
ခင်ပွန်းဆီက သိန်း ၈ ထောင်တန်ကား မွေးနေ့လက်ဆောင် ရခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြောက်ကိုရီးယားကို သွားရောက်
သူငယ်ချင်းကို မပြောပြသင့်တဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်းအရာ ၅ ခု
"Ocean's 8" ရုပ်ရှင်အထူးပွဲကို ထူးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ တက်ခဲ့ကြတဲ့ မင်းသမီးများ
တညင်းသီးစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေနိုင်လဲ
ဂရိတ် ဦးဖိုးစိန် နဲ့ ပထမ ကျောင်းသားသပိတ်
“ဝတ်စုံတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးရတာ သဘောကျတယ်” ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်နာဖြိုးကို
ဦးသောင်းထွန်း MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာမှု အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေ
အနုပညာပြခန်း ဒါရိုက်တာတဦးနဲ့ တွဲနေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာတဲ့ Jennifer Lawrence
အနောက်တိုင်း ဖက်ရှင်ပွဲတွေအထိ ခြေဆန့်လာတဲ့ တောင်ကိုရီးယား အနုပညာရှင်များ
မိတ်ကပ်မလိမ်းဘဲ သဘာဝအတိုင်း လှနေစေမယ့် နည်းလမ်း ၆ ခု
တောင်ကိုရီးယားမှာ ကြည့်ရှုနှုန်း စံချိန်တင်သွားတဲ့ “Jurassic World: Fallen Kingdom”
သတင်းအမှားများကြောင့် မြန်မာ့ ခရီးသွားကဏ္ဍ ကျဆင်းနေ ဟု ဆို
အသုံးပြုသူတွေရဲ့ Personal အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီများထံ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ Facebook
လယ်သမားများကို ချေးငွေပေးမည်ဟုဆိုကာ လိမ်လည်သူများအား တရားစွဲ
မိုးရာသီမှာ ဘယ်လို ဖက်ရှင်တွေ ဝတ်ဆင်မလဲ
ဆယ်တန်း ဂုဏ်ထူးရ အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရမလား
မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေကို ပြည်ထဲရေးက ပြတ်ပြတ်သားသား နှိမ်နင်းဖို့ လိုပြီ
တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဥက္ကာခဲ ၁ ဂရမ် ကန်ဒေါ်လာ ၈ ထောင် ဈေးပေါက်
ရခိုင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ရန် ကြံ့ခိုင်ရေး တိုက်တွန်း
Oriental Spa က တရုတ်နိုင်ငံသူ ၁၇ ဦး ပြည့်တန်ဆာမှုဖြင့် တရားစွဲခံရ
မကရင်မအမှု ဦးဉာဏ်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့မှ အခမဲ့လိုက်ပေးမည်
“Zoey အိတ်တွေက သမီးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာပါ” ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်နာ မပုံ့
အရေပြား ပြဿနာ အမျိုးမျိုးအတွက် အုတ်ဂျုံမှုန့်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
အဂတိလိုက်စားကြောင်း ကျော်ဇောသတင်းရှိသူများကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီ
ဒီဇိုင်း ပြောင်းလဲထားတဲ့ Gmail ကို ဇူလိုင်လအတွင်း လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်
အိပ်ငိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာ ၆ မျိုး
တရုတ်ခရီးသွားများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် စီးကရက် ထိုင်းက ထုတ်မည်
Mr. Sunshine ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ကြမယ့် သရုပ်ဆောင်များ
By မစ်ကီ 8 June 2018
ကိုရီးယားမင်းသား လီဗြောင်ဟွန်း ပါဝင်မယ့် “Mr. Sunshine” ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ပိုစတာတွေ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိ လာခဲ့ပါတယ်။ “Mr. Sunshine” ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ကိုရီးယားလေ့လာရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံကို စစ်သင်္ဘောတစင်းနဲ့ ပါသွားပြီး အမေရိကန် စစ်သားတယောက်အနေနဲ့ ကိုရီးယားမှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ ပြန်လာတဲ့ ကိုရီးယားအမျိုးသားတယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်မယ့် သမိုင်းနောက်ခံ ဒရာမာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့ “Descendants of the Sun” နဲ့ “Goblin” ဇာတ်လမ်းတွဲတို့ိုမှာ အတူတူ အလုပ် တွဲလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာမ Kim Eun Sook နဲ့ ဒါရိုက်တာ Lee Eung Bok တို့ရဲ့ ဖန်တီးမယ့် အခု ဒရာမာ အသစ်မှာတော့ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် တော်တော်များများ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ မင်းသား လီဗြောင်ဟွန်း၊ မင်းသမီး Kim Tae Ri (ကင်ထယ်ရီ) နဲ့ Yoo Yeon Seok (ယူယောင်းဆော့) တို့က ကိုရီးယားသမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို သရုပ်ဆောင် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်မယ့် သူရဲကောင်းတွေကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ပြီး တရားမျှတမှုကို ဦးတည်ကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား လီဗြောင်ဟွန်းကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ကိုရီးယားမှာ ကျွန်အဖြစ် မွေးဖွားလာပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ Eugene Choi အဖြစ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Kim Tae Ri ကတော့ ထက်မြက်တဲ့ စိတ်ရှိပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့မိသားစုရဲ့ သမီး Go Ae Shin အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Yoo Yeon Seok ကတော့ အသားသတ်သမားတဦးအနေနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးနောက် နဂါးပြာအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်မယ့်သူတဦးအဖြစ် ဂျိူဆွန်းပြည်ကို ပြန်လာမယ့် Goo Dong Mae အဖြစ် ပါဝင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “Mr. Sunshine” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဇူလိုင် ၇ ရက် ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီကစလို့ ပြသတော့မှာဖြစ်ပြီး အပိုင်း ၂၄ ပိုင်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။